Madaxweynaha Somaliya oo dib ugu soo laabtay Muqdisho. - Horseed Media
Madaxweynaha Somaliya oo dib ugu soo laabtay Muqdisho. December 8, 2012 Share this:FacebookTwitterGoogleMadaxweynaha Somaliya o lagu so dhoweynayo Magaaladda Istanbul
Muqdisho (HM) Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya Xasan Sh. Maxamuud ayaa maanta dib ugu soo laabtay Magaaladda Muqdisho kadib safar qaatay 1 todobaad oo uu ugu maqnaa Wadanka Turkiga.
Safarka Madaxweynaha waxaa ku weheliyey xubno ka tirsan Golaha Wasiiradda oo ay ka mid ahaayeen Wasiiradda Arrimaha Dibada & Gaashaandhiga sidoo kale waxaa iyna ka mid ahaa weftigii la socday Madaxweynaha ee maanta dib ugu so laabtay Dalka Saraakiil ka tirsan Madaxtooyadda.
Mudadii uu joogay Madaxweynuhu wadanka Turkiga wuxuu la kulmay Madaxweynaha wadankaas Cabdala Gual & Raysal Wasaare Rajab Dayib Ordugan iyadoo ay wada saxiixdeen Heshiisyo dhowr ah Dowladda Somaliya & Dowladda Turkigu kuwaas oo ay ku jireen heshiisyo la xiriiray dhanka Gaashaandhiga..
Booqashada uu Madaxweynuhu ku tegay Dalka Turkiga ayaa ahayd tii ugu horaysay ee uu ku tago wadankaas tan & markii Xafiiska loo doortay 10 Sep, 2012.